TOROHEVITRA ARAKA NY LALÀNA NOHO NY LOZAM-PIFAMOIVOIZANA
ARA-DALÀNA TOROHEVITRA MOMBA NY LOZA
Na izany aza, dia vitsy amintsika no iray manokana mpampanoa lalàna, dia vonona ny hanome izany fanompoana izany
Tsy maintsy miantehitra amin’ny tenantsika, amin’ny tsara indrindra ao amin’ny raharaha — mba hanampy amin’ny famonjena ny mpandraharaha. Matetika izany no mitarika ny fisehoan-javatra ara-dalàna ny fahadisoana, izay sarotra ary indraindray tsy marina amin’ny hoavy.Ny sasany mpamily dia mino fa izy tenany no afaka mamaritra ny ambaratongam-tsiny ny mpandray anjara tsirairay ny lozam-pifamoivoizana, fa izany no azo atao afa-tsy mazava ny toe-javatra (vato misakana ny zo, ny fifamoivoizana amin’ny jiro mena).
Ary na dia ao amin’ny toe-javatra ireo — fa tsy foana
Ny ankamaroan ny fomba fiasa ny fisehoan-javatra ny loza dia mazava fa izany dia sarotra avy hatrany mba hijery izay zava-misy no sarotra, ary izay tsotra.
Mpitari-dalana, mikasika ny asa tao amin’ny loza:
Raha toa ka misy ny maratra, — miantso ny fiara mpitondra Marary.
Avy hatrany rehefa avy ny loza, miroso araka ny fepetra. Ny fitsipi-dalana intsony, ary tsy hikasika ny fiara, mialà eo amin’ny fanairana; tsy mifindra misy zavatra mifandray amin’ny loza, ary aza avela ny hafa hanao izany.
Tsy latsaka ny fandresen-dahatra»mba hahatakatra tsy ny Mpitandro filaminana», aza hadinoina ny miantso ny polisy.
Firaketana an-tsoratra rehetra nanatri-maso ny loza.
Tsy mampiseho ny mpitandro filaminana ny tsy fahalalana ny fitsipiky ny Protocol mpanara-maso dia afaka mampiasa.
Tsy handao ny mpanara-maso irery miaraka amin’ny antoko hafa ny loza.
Moa ve tsy mampiseho loatra ny fahalalana tsara ny lalàna sy ny filaminana ny fisoratana anarana ny fiara loza. Kely fanadinoana ny polisy mpanara-maso ao amin’ny fanomanana ny Protocol afaka manampy amin’ny ho avy mba hamaha ny raharaha ao amin’ny famindram-po.
Ataovy azo antoka fa ny fahasimbana ny fiara dia voarakitra ao amin’ny minitra.
Tsy misy famantarana ny antontan-taratasy izay midika hoe ny tsiny raha tsy mazava fa tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny mpanara-maso ary haingana araka izay azo atao, ny fifandraisana mahay vava
Antontan-taratasy ho an'ny real estate purchase ao Gresy lisitry ny antontan-taratasy, dia ilaina ny